Inona no Tokony ho Tsaroanao Momba An’i Jesosy? | Ampianaro ny Zanakao
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Twi Uruund Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Maro no mahatsiaro an’i Jesosy zazakely ao anaty fihinanam-bilona, rehefa Desambra. Ilay izy zazakely ihany ve anefa no tokony ho tsaroantsika?... * Andeha isika handinika izay nitranga tamin’ireo mpiandry ondry tany amin’ny saha tany akaikin’i Betlehema. Amin’izay ho hitantsika hoe inona no tena tokony hahatsiarovantsika an’i Jesosy.
Nisy anjely niseho tampoka, indray alina, ary niteny tamin’izy ireo hoe: “Mpamonjy no teraka ho anareo androany ao an-tanànan’i Davida, dia i Kristy Tompo.” Nilaza koa ilay anjely fa ho hitan’izy ireo i Jesosy “nofehezina lamba sady mandry ao anaty fihinanam-bilona.” Avy eo dia nisy anjely maro be niseho sy “nidera an’Andriamanitra.”
Ahoana ny fihetseham-ponao raha maheno anjely midera an’Andriamanitra ianao?... Faly ireo mpiandry ondry! Hoy izy ireo: ‘Andao ho any Betlehema avy hatrany mba hijery izany zava-nitranga izany.’ Hitan’izy ireo tany i ‘Maria sy Josefa, ary ny zazakely nandry tao amin’ny fihinanam-bilona.’
Tsy ela dia nisy olon-kafa tonga tany amin’ny nisy an’i Maria sy Josefa tany Betlehema. Faly daholo izy ireo rehefa nilazan’ireo mpiandry ondry an’izay nitranga. Faly koa ve ianao mahalala an’izany zavatra mahafinaritra izany?... Faly izay rehetra tia an’i Jehovah. Nahoana no tena mahafaly ny nahaterahan’i Jesosy? Andeha hojerentsika izay nitranga, tamin’i Maria mbola tsy nanambady.
Nitsidika an’i Maria ny anjely iray atao hoe Gabriela, indray andro. Nilaza izy fa hiteraka zazalahy i Maria ary “ho lehibe izy ka hantsoina hoe Zanaky ny Avo Indrindra.” Nilaza koa i Gabriela fa ‘ho mpanjaka mandrakizay’ ilay zaza, “ary tsy hifarana mihitsy ny fanjakany.”
Tian’i Maria ho fantatra hoe ahoana no hetezan’izany satria izy mbola tsy nanambady. Hoy àry i Gabriela: ‘Hanaloka anao ny herin’ny Avo Indrindra ary hantsoina hoe masina, Zanak’Andriamanitra, ilay haterakao.’ Nalaina tany an-danitra ny ain’i Jesosy ary nafindra tao an-kibon’i Maria, mba ho lasa zazakely. Fahagagana lehibe izany!
Efa nahita sarina “olon-kendry” telo miaraka amin’ny mpiandry ondry mitsidika an’i Jesosy zazakely ve ianao?... Fahita izany rehefa Krismasy. Tsy marina anefa ireny sary ireny. Mpanandro ireo “olon-kendry” ireo, ary tsy tian’Andriamanitra ny fanandroana. Inona no nitranga rehefa tonga izy ireo? Hoy ny Baiboly: “Rehefa niditra tao amin’ilay trano izy ireo, dia nahita an’ilay zaza sy Maria reniny.” Efa tsy zazakely tao amin’ny fihinanam-bilona intsony àry i Jesosy tamin’io, fa efa lehibebe ary tao an-trano niaraka tamin’i Josefa sy Maria.
Ahoana no nahitan’ireo mpanandro an’i Jesosy?... Nisy “kintana” nitarika azy ireo. Tsy tonga dia tany Betlehema anefa no nitarihany azy ireo fa tany amin’i Heroda Mpanjaka tany Jerosalema. Milaza ny Baiboly fa te hahita an’i Jesosy i Heroda mba hamonoany azy. Iza, araka ny hevitrao, no nampipoitra an’ilay kintana nitarika an’ireo mpanandro ho any amin’i Heroda?... Tsy i Jehovah, ilay Andriamanitra marina, fa i Satana Devoly, ilay fahavalony.
Ataon’i Satana izao izay hieritreretan’ny olona fa mbola zazakely foana i Jesosy. Hoy anefa ny anjely Gabriela tamin’i Maria: ‘Ho mpanjaka mandrakizay izy, ary tsy hifarana mihitsy ny fanjakany.’ Efa Mpanjaka any an-danitra i Jesosy, ary tsy ho ela izy dia handringana ny fahavalon’Andriamanitra rehetra. Izany no tokony ho tsaroantsika momba an’i Jesosy ary tokony horesahintsika amin’ny hafa izany.
Lioka 1:26-35; 2:8-18
Matio 2:7-12; 1 Petera 5:8
Apokalypsy 19:19-21; 1 Jaona 2:17
Nampanantena i Jesosy, tamin’izy efa ho faty, fa hiaina ao amin’ny Paradisa ny jiolahy iray. Inona no tiany holazaina, ary hanao ahoana io Paradisa io?
Nahoana no navelan’Andriamanitra i Petera fa i Ananiasy tsy navelany, nefa samy nandainga izy ireo?
Inona no hanampy anao hifandray foana amin’Andriamanitra, na dia tsy manompo azy aza ny dada sy mamanao?
Naka zavatr’olona i Gehazy. Inona no ianarantsika avy amin’izany?
Mafy Loha Izy Nefa avy eo Nankatò
Hizara Hizara Inona no Tokony ho Tsaroanao Momba An’i Jesosy Kristy?